भूकम्प माथिको परमेश्वरलाई सधैँ हेरौं | eBachan Nepali Christian Magazine
भूकम्प माथिको परमेश्वरलाई सधैँ हेरौं
– सिमोन पाठक
नेपालमा भएको महाभूकम्पको तरंग देशभित्र र बाहिर रहेका नेपाली लगायत विश्वमानै गुञ्जिरहेको छ । वि.सं. १९९० सालको भूकम्पको कथा सुन्दै आएका नेपालीहरूको लागि अब सुनाउनको लागि आफ्नै अनुभवको कथा बनेको छ । यो भूकम्पले धेरै नेपालीहरूको ज्यान लियो । तर येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नेहरूको निम्ति मृत्युको खिलछैन । उहाँहरू प्रभु येशूले तयार पार्नुभएको अनन्त राज्यमाप्रवेश गर्नुभयो । प्रभु येशूले विचलित भएका चेलाहरूलाई भन्नुभयो, “तिमीहरूको ह्दय व्याकुल नहोस् । तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, ममाथि पनि विश्वास गर । मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन् । (यूहन्ना १४ः१–२) । भूकम्पको दिनभन्दा अघिका दिनहरू वा वर्षहरूमा प्रभुमा सुत्नेहरू र भूकम्पको प्रकोपमा परेर मृत्यु हुनेहरू सबैजना प्रभु येशूसँग हुनुहुन्छ । सधैँको निम्ति प्रभु येशूको राज्यमा उहाँसँगै हुनपाउनु सौभाग्य हो ।
पावलले प्रभु येशूमा सुत्नेहरूको विषयमा यसरी लेखेका छन्, “तर भाइ हो, सुतिगएकाहरूका विषयमा तिमीहरू अजान बस भन्ने हामी इच्छा गर्दैनौं, र तिमीहरूले आशा नहुने मानिसहरू जस्ता शोक गर्नु नपरोस् । किनकि हामी विश्वास गर्छाै, कि येशू मर्नुभयो र फेरि जिइउठ्नुभयो र त्यसरी नै परमेश्वरले उहाँमा सुतिगएकाहरूलाई येशूद्वारा ल्याउनुहुनेछ । प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई घोषणा गर्छाै, कि हामी, जो जीवितछौं र प्रभुको पुनरागमन सम्म बाँचिरहन्छौं, सुतिगएकाहरूलाई कुनै किसिमले पनि उछिन्नेछैनौं” (१ थेसलोनिकी ४ः१३–१५) । प्रभु येशूमा विश्वास गरेकाहरूको निम्ति मृत्यु उहाँलाई आमने सामने देख्ने ढोका हो । नेपालमा भूकम्पगएको दिन २०७२ वैशाख १२ गते इसाईहरूको निम्ति परमेश्वरको घर मण्डलीमा भेलाभएर आराधना गर्ने दिनथियो । लाखौको संख्यामा प्रभु येशूमा विश्वास गर्नेहरू आराधना गर्दागर्दै कतिजना प्रभुसँग सधैँका लागि हुनलाई जानुभयो । उहाँहरूको निम्ति संसारको दुःख, पीडा, प्राकृतिक प्रकोपको डर अब छैन । उहाँहरू डर, त्रास र मृत्युमाथि सधैँकालागि विजयी हुनुभएको छ । उहाँहरूले पृथ्वीको मिशन पूरा गर्नुभएको छ ।
हामी बाँचेकाहरू के को निम्ति जिउँने ? किन प्रभुले महाभूकम्पबाट बचाउनुभयो ? हामी फेरि पनि हिजोका दिनहरूमा राखेको सोच र लक्ष्यमै सिमितहुने कि फरक किसिमले जीवन जिउने प्रण गर्ने ? हाम्रो जीवनको साँचो हामीसँग छैन भन्ने कुराको सन्देश सयौपटक गएको भूकम्पको झट्काले दिइसकेको छ । भूकम्पगएको दिनदेखि बहत्तर घण्टाको अवधिमा जमीन कम्पनसाथ कतिपटक चिच्यायौं ? किन हामी चिच्याएका होला ? किन हामीले बचाउनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गरेका होला ? हामी आफ्नै लागि बाँच्नका लागि चिच्यायौं कि प्रभुको निम्ति केही गर्नु बाँकी नै छ भन्ने सोचले चिच्याएका हौला ? हामीहरू आफ्नो र परिवारको निम्ति बाँच्नपाऊँ भनेर आपद्को घडीमा प्रभुलाई पुकारा गर्नु स्वभाविक हो । तर हामी आफ्नो र परिवारको निम्ति मात्र होइन प्रभुको त्रूmसको प्रेमको सन्देश फैलाउनको निम्ति जिउनु चाहिँ महान उद्देश्य हो । हामीलाई प्रभुले फेरि एकपटक मृत्युको मुखबाट बचाउनुभएको छ । हामीहरूको दिनलाई विचार गरेर महान उद्देश्यको निम्ति बाँकीदिनहरू जीउनलाई योजना बनाउनुपर्दछ । यो पटक भूकम्पको भुमरीमा नपरेकाहरूले भूकम्पमा परेका नेपालीहरूको जीवनद्वारा शिक्षा सिकेर जीवन जिउने तरिकामा फरक ल्याउने समय अहिले नै हो भोली ढिला हुनसक्छ ।
बाइबल अनुसार भूकम्प के को चिन्ह हो ? प्रभु येशूले चेलाहरूलाई अन्त्यका दिनका चिन्हहरूको विषयमा यसरी भन्नुभयो, “होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस् । किनभने धेरै जना मेरो नाउँमा ‘म ख्रीष्ट हुँ’भन्दै आउनेछन्, र धेरैलाई बहकाउनेछन् । तिमीहरूले युद्धहरू र युद्धहरूका हल्ला सुन्नेछौ । नघबराओ, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्त्य त त्यत्ति नै बेला हुँदैन । किनभने जातिको विरूद्धमा जाति, र राज्यको विरूद्धमा राज्य उठ्नेछ, र ठाउँ–ठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछन्” (मत्ती २४ः४–७) । भूकम्पजानु प्रभु येशूको आगमनको धेरैवटा चिन्हहरू मध्येको एउटा हो । उहाँको आगमन हुनु अघि भूकम्पहरू जानेछ भन्ने कुरा प्रभु येशू स्वयंले भन्नुभयो । नेपालमा भूकम्पजाने कुरा अचानक भएको होइन । वर्षाैदेखि भूगर्भविद्हरूले नेपालमा भूकम्प जानेछ त्यसको निम्ति पूर्वतयारी हुनु आवश्यक छ भनेर घरिघरि भन्दै आएका थिए । तर नेपाल सरकार र सारा नेपालीहरूले कानमा तेल हालेर बस्ने काम बाहेक अरू केही भएन । आफ्नै लागि मात्र सोचेर करोडौ रूपिँयाखर्च गरेर घर बनायौं तर भूकम्पबाट बाँच्नको निम्ति टुँडिखेलको खुल्ला आकाश, सडक पेटी र खुल्ला मैदान र मण्डली घरहरूमा तीन रातभन्दा बढी समय बितायौं । के हामीले यस्तो दिनहरू आउनेछ भनेर कल्पना गरेका थियौं त ? हामीले विभिन्न देशहरूमा भूकम्पको समयमा भएको क्षति, पीडा र शरणार्थी जीवनको समाचार पढेका, सुनेका र देखेका मात्र थियौं । नयाँ साल २०७२ को वैशाख १२ गते म पनि एक दिन यस्तै जीवन जीउन पुग्नेछु भनेर पक्कै पनि सोचेका थिएनौं होला ।
प्रभु येशू पृथ्वीमा हुनुहुँदा नै भूकम्प जानेछ भनेर भनी सक्नुभएको छ । भूकम्पजानु प्रभु येशूले भन्नुभएको अन्त्यका दिनचिन्हरू पूरा हुनु हो । एक्काइसौं शताब्दी देखि यता पृथ्वीको विभिन्न भागमा भूकम्पगइ नै रहेको छ । उहाँले मानिसहरूलाई विभिन्न समयमा हल्लाइराख्नुभएको छ । यसपटक नेपालीहरूलाई हल्लाउनु भएको छ ।
नेइम ज्ञानेश्वर मण्डलीको वरपर रहेका छिमेकीहरू मण्डलीमा आऊन् भनेर प्रार्थना गरेको वर्षौ बितिसकेको छ । येशूको पुनरूत्थानको दिनमा जलपान कार्यक्रम गरेर समय–समयमा मण्डलीमा निम्तो दिने काम पनिहुँदै आएको थियो । तर मण्डली वरपर घर भएका छिमेकीहरू न्यून संख्यामा मात्र आउने गर्नुहुन्थ्यो । तर महाभूकम्पको झट्काले उहाँहरूलाई मण्डली भवनमा दौड्नु बाहेकअरू केही उपाय रहेन । तीन रातसम्म मण्डली भवनमा ६ सयभन्दा बढीको संख्यामा मानिसहरू आश्रय लिनआउनुभयो जसमा तीन सयभन्दा बढी मानिसहरू मण्डली वरपरका छिमेकीहरू नै हुनुहुन्थ्यो । मण्डलीप्रति कृतज्ञ हुँदै एकजनाले अन्तिम दिनमा जानु अघि तीनहजारको भेटी पनि मण्डलीको निम्तिभन्दै मेरो हातमा दिनुभयो । यो प्रभुको काम हो । प्रभुले जातिजातिहरूलाई हल्लाउँछु भन्ने वचन पूरा भइराखेको छ । मण्डलीले चढाएको प्रार्थना खेर गएको छैन । उद्धार नपाएका मानिसहरूको मुक्ति र उद्धारको निम्ति प्रार्थना चढाउन नथाकौं । प्रभुको आगमनको निम्ति सुसमाचार प्रचारिनुपर्दछ । “अनि राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सबै जातिहरूका लागि गवाहीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त्य आउनेछ” (मत्ती २४ः१४) । प्रभु येशूको आगमनको अघि झुटा शिक्षक,
झुटा अगमवक्ताहरू ख्रीष्ट विरोधीहरू आउनेछन्, ठाउँ–ठाउँमा अनिकालर भूकम्प हुनेछन् भन्ने वचन पूरा भइराखेको छ । मण्डलीहरूलाई विश्वका विभिन्न देशहरूमा सताउने, मार्ने कामहरू भइराखेका छन्। यी सबै प्रभुले भन्नुभएको अन्त्यका दिनका चिन्हहरू हुन् ।
हाम्रो ह्दयमा डरलाई होइन तर परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई स्थानदिऔं । हामीहरू वर्तमान परिस्थितिहरूलाई देखेर मनमा डरको तरंग फैलाउनेहरू नबनौं । परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई पक्रेर जिउने र प्रभुले दिनुभएको बाँकी जीवनमा उहाँको मिशन पूरा गर्नेहरू बन्नसकौं । “तँ पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु । तँ नदीहरूबाट भएर जाँदा तिनले तलाई डुबाउनेछैन् । तँ आगोबाट हिँडेर जाँदा डढ्ने छैनस् । त्यसको ज्वालाले तँलाई भष्म पार्नेछैन” (यशैया ४३ः२) । “यसैले नडरा, किनकि म तँसित छु । निरूत्साहित नहो, किनकि म तेरा परमेश्वर हुँ । म तँलाई बलियो पार्नेछु । म तँलाई सहायता गर्नेछु । मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तँलाई समाल्नेछु” (यशैया ४१ः१०) । “…हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु” (मत्ती २८ः२० ख) । परमेश्वरले दिनुभएको बाँकी आयुमा उहाँको राज्यको निम्ति अब के गर्ने ?
Previous: 5०० भन्दा वढी इसाईहरुको मृत्यु, घाइते तथा हजारौ चर्च क्षतीग्रत
Next: महाभूकम्पबाट परमेश्वरले मलाई यसरी बचाउनुभयो